Indlu encinci, epholileyo yegalari e-Chiemgau
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIngo
Sirenta indlu yegalari enefenitshala epheleleyo kwaye ithokomele kakhulu kwindawo ezolileyo. Kwindawo esezantsi yindawo yokuhlala kunye neyokutyela kunye nokufikelela kwigumbi lokuhlambela elineshawa. Isitebhisi somthi sikhokelela kwindawo yokulala enebhedi ephindwe kabini kumgangatho ophezulu (igalari ekhazimlisiweyo). Ikhitshi liqulethe yonke into oyifunayo ukuyipheka.
Kwigaraji phantsi kwendlu umatshini wokuhlamba kunye nendawo yeebhayisikili, i-skis ... I-E-bikes inokuhlawulwa.
Ungafumana isidlo sakusasa kwitafile encinci egotywayo, kwigumbi lokuhlala kukho iTV yescreen esicaba, iincwadi onokuzijonga kunye nesofa enomsebenzi wokulala (itafile yekofu kunye nekhaphethi kufuneka zihanjiswe / zihlengahlengiswe, kukho indawo eyongezelelweyo yokuzipholela. phambi kweTV okanye njengendawo yokulala)
Indawo yokungena ikwasebenza njenge balcony encinci onokuthi uhlale kuyo kwaye ujonge egadini.
Le ndlu ikwindawo ezolileyo eChiemgau, indawo edumileyo yeeholide. Kufutshane kukho iHofstättersee, iSimsee kunye neRinsersee. IRosenheim imalunga neekhilomitha ezisi-7, iChiemsee ili-15 km, iintaba zimalunga neekhilomitha ezingama-20. Umgama oya eMunich umalunga neekhilomitha ezingama-60 ukuya eSalzburg ziikhilomitha ezingama-75.
Umbuki zindwendwe ngu- Ingo
Umninimzi uhlala kwindlu esebumelwaneni.